Xaflad si Heer Sare ah Loo soo agaasimay ayaa ka Dhacday Magaalada Leicester City Laguna Xusaayay Sanadguuardii 12aad ee Puntland+Sawiro | raascasayrmedia.com
← Qosol iyo Qisooyin Hore Qaybti 5aad W/Q Xareed Saalax Cadaawe
Dagaal mar kale dib uga qarxey Degaanka Galgala ee duleedka magalada Boosaaso →
August 8, 2010 · 2:41 pm
Xaflad si Heer Sare ah Loo soo agaasimay ayaa ka Dhacday Magaalada Leicester City Laguna Xusaayay Sanadguuardii 12aad ee Puntland+Sawiro
Xaflad aad u ballaran oo lagu xusayey sanadguurada 12aad ee kasoo wareegtay asaaska Puntland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Leicester. Xafladaas oo ay kasoo qeyb galeen dadweyne aad u fara baddan oo ka kala yimid dhammaan magaalooyinka ku dhadhaw magaalada Leicester iyo magaalada London oo ay ka yimaadeen mas’uuliyiin reer Puntland ah.
Xafladaas waxaa kasoo qeyb galay mas’uuliyiinta ay ka mid yihiin Xildhibaan Aadan Maxamed Cali oo ah aabihiii waxbarashada Soomaaliya ahaana Wasiirkii Waxbarashada Xilligii barisamaadki, waxaa kaloo kasoo qeybgalay Dr. Axmed Xasan Barre (Shimbirolaaye ) oo ah wakiilka Puntland u fadhiya Yurub isla markaana ahaan jiray Wasiir dowladii hore ee Soomaaliya, sidoo kale Profesor Cabdulqaadir Jibriil oo isna ah wakiilka Puntland ee Uk. Waxaa kaloo goob joog ahaa Xildhibaan Cabdirishiid Shiikh Siciid oo ka mid ah xildhibaanada DFKS.
Xafladaas oo ku bilaabatay jawi aad u wanaagsan, ayaa ugu horeyn waxaa kalimad alle ka cabsi ah halkaas ku furay Shiikh Cabdiqani oo dadka ugu baaqay in ay ilaashadaan kuna mahdiyaan nimcooyinka uu Allaah siiyay ee nabad ah.
waxaa hadalkii qaatay Cabdixakiim Jaamac Jooje oo ah gudoomiyaha guddigii qabanqaabada xafladda oo halkaas ka soo jeediyay kalimad ku saabsaneyd soo dhaweyn iyo qaabka iyo Habsami u socodka barnaamijka,
isagoo halkaas uga mahad celiyay dadkii kala soo qeybqaatay qabanqaabada xafladda.
Kadib waxaa xafladda daadihinteed la wareegay Abwaanka da’da yar ee Sahal Maxamed Axmed ( Curri )
oo runtii barnaamijka ku daadihinayey hab cajiib ah oo aad looga helay isagoo ku cabirayey qaab suugaaneed. Kadib waxaa la galay kaalintii qudbooyinka iyadoo uu hadalka markii ugu horeeyay lagu soo dhaweeyay mas’uul sare xildhibaan Aadan Maxamed Cali oo ka hadlay xaaladaha dhabhta ah ee Soomaaliyo iyo Sidi Puntland lagu asaasay.
Waxaa kaloo uu Aadan Maxamed Cali dadka ku booriyay in laga shaqeeyo sidi loo soo celin lahaa Soomaalinimada, loona ilaashan lahaa dawladdan tabarta daran oo ayan naga bur burin, si halkaas looga ambaqaado.
Waxaa isagana hadlakii lagu soo dhaweeyay Dr. Axmed Xasan Barre (Shimbirolaaye ) oo isna ka waramay xaaladaha
haatan ee Puntland iyo horumarka uu ku tilaabsaday haatan maamulka ka jira. Sidoo kale waxaa iyagana halkaas ka hadlay Prof. Cabdulqaadir Jibriil, Xildhibaan Cabdirishiid Sh. Siciid, Consular Cabdule Cusmaan oo ka socday madaxda magaalada Leicester City Council iyo Shukri Siciid oo ku hadlaysay magaca Gabdhaha reer Puntland ee Leicester.
Xafladaas oo runtii loo soo agaasimay si aad iyo aad u heer sareysa ayaa waxay ay ku soo gabagabowday jawi wanaagsan. Waxaana halkaas si gaar ah loogu mahadceliay dadkii soo qabanqaabiyay , sidoo kale idaacada localka ah ee EAVA Radio Leicester oo uu ka socday wariyaha da’da yar Fahad Omar Said iyo sidoo kale televishinka Somali Channel wakiiladiisa magaalada Leicester iyo waliba websideka Allcaseyr oo goob joog ka ahaa xafladda.
Guud ahaan sidaas ayeey xafladdii kusoo gabagabowday waxaan mahad gaar ah iska leh maamulka ururka Puntland Youth and Sports Development Organisation oo runtii suurto galiyay bacda Allaah in ay xafladan qabsoonto.
Abdi xakiim Jaamac jooje